पुरुषहरुले किन लगाउँदैछन् महिलाका ब्रा र पेन्टी ? - Safalnews
पुरुषहरुले किन लगाउँदैछन् महिलाका ब्रा र पेन्टी ?
सफल न्युज द्वारा २०७७ आश्विन १७ गते शनिबार ०९:३७ मा प्रकाशित
1 FacebookTwitterWhatsAppViberTelegramFacebook Messenger
Woman wearing patterned underwear
महिला र पुरुषको शारीरिक संरचनाको भिन्नताले उनीहरुका पहिरन पनि एक अर्काबाट भिन्न हुन्छन् । तर जापानी पुरुषहरुमा पछिल्लो दिनमा महिलाका भित्री वस्त्र लगाउने क्रेज बढिरहेको छ ।
पुरुषहरुमा तिव्र रुपमा बढ्दै जाँदा पुरुषहरुले आफ्ना साइज अनुसारका महिलाले लगाउने भित्री वस्त्र अनलाइनमार्फत खरीद गर्न अर्डर गरिरहेका छन् ।
जापानमा महिला अन्डरगार्मेन्ट्सको माग यतिधेरै बढेको छ की कम्पनीहरुले पुरुषहरुलाई मिल्ने महिलाका भित्री वस्त्र उत्पादन गरिरहेका छन् । सपिंग मल र अनलाइनमा पुरुषहरुले आफ्ना लागि महिलाका भित्री वस्त्र खरीद गरिरहेका छन् ।
पुरुषहरुले यसरी महिलाका कपडा लगाउने क्रेज बढाउनुमा हर्मोन परिवर्तन मुख्य कारक रहेको बताइएको छ । हमोर्नले गर्दा जापानी पुरुषहरुको सारीरिक संरचना परिवर्तन भैरहेको छ । छातिको आकार बढिरहेको छ भने सरीर स्लिम बनिरहेको छ ।
पुरुषका लागि महिलाका जस्तै भित्री वस्त्र थपिएको मात्र होइन पुरुषहरुका अन्य कपडा पहिले भन्दा स्लिम हुँदै गएका छन् र कम्पनीहरुले सोही मुताविक साँघुरा कपडा उत्पादन गरिरहनुपरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुका बारेमा केही रोचक तथ्य, एकैजना व्यक्तिलाई दुईजना राष्ट्रपतिको…
यौनशक्ति बढाउन सर्पको मासु !
बिस्कुटको स्वाद चाख्ने जागिरलाई वार्षिक ६४ लाख रुपैयाँ तलब
बढ्दैछ साङ्लाको प्रकोप, यसरी नियन्त्रण गर्नुहोस्
पोखरा विमानस्थलप्रति पोउवा संघको चासो
पत्रकार महासंघ कास्कीद्धारा साधारण सभामा सम्मान तथा पुरस्कार अर्पण
‘संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था…
कामचलाउ प्रवृतिले ठूलै जोखिम मोल्नुपर्ने खतरा आउनसक्ने प्रमुख जिसी
निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलागाैं – राष्ट्रिय सभा…
डिपार्टमेण्ट स्टोरमा सामान्दा किन्दा आचार्यले पाए स्कुटर
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुका बारेमा केही रोचक तथ्य, एकैजना व्यक्तिलाई…
पर्यटको मात्र हैन् पोखरा र आसपासका क्षेत्र चराचुरुङ्गीको रोजाइमा